कम्प्युटर, फाइल प्रकार
माईक्रोसफ्ट एक्सेल सफ्टवेयर कारण यसको विशिष्टताको गर्न एकदम लोकप्रिय छ। यो अनुप्रयोग गतिविधि सबै क्षेत्रहरू मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक्सेल छैन संख्या मात्र काम गर्न सक्छन्, तर पनि रेखांकन र चार्ट को रूप मा जानकारी प्रदान गर्न। विभिन्न पेशों प्रतिनिधिको काम को एक ठूलो रकम किनभने यो कार्यक्रम को ठीक बाहिर।
लगभग सबै पीसी प्रयोगकर्ता माईक्रोसफ्ट एक्सेल मा काम गर्न आवश्यकता सामना। यस्तो लाइन समेकन, स्वचालित नम्बर, वा कसरी रूपमा विषयहरू एक्सेल लाइन, एकदम सान्दर्भिक मा एक पंक्ति बनाउन।
एक्सेल मा काम: रेखा र आफ्नो लम्बाइ संख्या
प्रत्येक संस्करण को पङ्क्तिहरू एक निश्चित नम्बर आवश्यक छ। एमएस एक्सेल 2003 मा, तपाईं 65.536 रेखाहरू प्रयोग गर्नुहोस्, र एमएस एक्सेल 2010 मा गर्न सक्छन् - पहिले नै 1.048.576।
शब्द "स्ट्रिङ को लम्बाइ" दुई nuances समावेश छ। यो सूचक कक्षहरूको संख्या र सेल मा प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेर वर्ण संख्या मा मापन गर्न सकिन्छ।
16 384 कक्षहरू - एमएस एक्सेल 2003 मा स्तम्भहरू संख्या 256. एमएस एक्सेल प्रदान 2010 को लागि ठूलो अवसर हो।
दुवै संस्करण 32.767 वर्ण हो जो सेल, वर्णहरूको नै संख्या छ। सेल, यी सबै वर्ण, को पाठ्यक्रम, छैन देख्न सकिन्छ, तर तिनीहरूले सूत्र पट्टी मा देख्न सकिन्छ।
कसरी सम्मिलित र Excel पङ्क्तिहरू मेटाउन?
दुई तरिकामा समस्या समाधान गर्न:
सन्दर्भ मेनु प्रयोग गरेर। यसलाई जहाँ लाइन स्थित गरिनेछ विशेष स्थान हाइलाइट, र त्यसपछि गर्न मेनुमा क्लिक गर्न दायाँ माउस बटन प्रयोग आवश्यक छ। चयन पछि "सम्मिलित" "रेखा" देखिन्छ। यसलाई "ठीक" क्लिक गरेर कार्य पुष्टि गर्न आवश्यक छ।
नियन्त्रण प्यानल मार्फत। के तपाईं "सम्मिलित" र त्यसपछि "पङ्क्ति सम्मिलित" मा क्लिक गर्नुहोस्, लाइन लागि र "मुख्य" ट्याब फेला पार्न नियन्त्रण प्यानल मा एक स्थान रोज्नुपर्छ।
पङ्क्तिहरू मेटाउने त्यसैगरि गरिन्छ, तर यसको सट्टा वस्तुको "सम्मिलित" मा क्लिक गर्न आवश्यक छ "मेट्नुहोस्।"
एक्सेल मा पङ्क्ति उचाइ
यो मापदण्ड धेरै तरिकामा नियमन छ। सबैभन्दा सुविधाजनक र सजिलो - यो माउस प्रयोग गरेर उचाइ परिवर्तन हो। कर्सर लाइन नम्बर मा राखिएको हुनुपर्छ र त्यसपछि बटन पकड, सुत्छन् वा आकार यसलाई तल संकुचन।
पनि नियन्त्रण प्यानल को माध्यम द्वारा उचाइ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। को "घर" मा "स्वरूप" चयन गर्न र त्यसपछि "पङ्क्ति उचाइ" क्लिक गर्नुहोस्। विन्डो मा तपाईं एक विशेष मामला मा चाहेको मान निर्दिष्ट गर्न चाहन्छु।
दुवै संस्करण पङ्क्ति उचाइ स्वचालित चयन चाहिन्छ। तपाईं त्यहाँ छ भनेर पाठ अनुसार सेटिङ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो आवश्यक छ। तर, यो कार्य प्रयोग गर्दा, तपाईं आदेश गर्दा मात्र बक्समा "र्याप" को "पंक्तिबद्ध" ट्याबमा जाँच गरिन्छ कार्यान्वयन गरिने जान्नु आवश्यक छ। सेट गर्न सकिन्छ भनेर अधिकतम उचाइ - यो 409 मान छ।
एक्सेल मा पंक्तिहरूको समूह
आवश्यक भएमा, रेखा को समूह तिनीहरूलाई चयन गर्नुहोस् र "डाटा" ट्याब जान आवश्यक छ। "समूह" - त्यहाँ "संरचना" चयन गर्न आवश्यक हुनेछ।
Ungrouping पङ्क्तिहरू analogy द्वारा, बस "असमूह" क्लिक गर्नुहोस्।
र तपाईंले केही रेखाहरू चाहिएमा?
धेरै मानिसहरू एक्सेल लाइन मा एक पंक्ति कसरी बनाउने रुचि राख्नुहुन्छ। कुनै ठूलो सम्झौता पनि छ। एक्सेल मा बनाउन क्रममा एक पंक्ति मा केही रेखाहरू, तपाईं कुञ्जीपाटी सर्टकट Alt प्रयोग + Enter गर्न आवश्यक छ। स्थानान्तरण कक्षमा सिधै कार्यान्वयन गरिनेछ, डाटा प्रविष्टि एक अनुच्छेद संग जारी छ।
लुकेका रेखा र आफ्नो पछि म्यापिङ
कहिलेकाहीं जब एक्सेल कार्यक्रम संग काम गर्न, यसलाई आवश्यक पङ्क्तिहरू लुकाउन छ। यो दायाँ माउस बटन प्रयोग गर्न सकिन्छ। सन्दर्भ मेनु कल पछि, केही टुकडे चयन पछि "लुकाउनुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
जहाँ तपाईं लुकेका पङ्क्तिहरू प्रदर्शन गर्न चाहेको मामला मा, कार्य हुनुपर्छ निम्नानुसार: एक विशिष्ट श्रेणी माथिको वा तल छन् कि पनि व्यक्तिहरूलाई कब्जा गर्न आवश्यक टुक्रा चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि, दायाँ माउस बटन क्लिक गरेर, तपाईं देख्ने एक सन्दर्भ मेनु तपाईं चयन गर्नुपर्छ जहाँ "देखाउनुहोस्"।
Excel सँग जोडी
टेबल सिर्जना गर्दा भनेर कक्षहरू मर्ज गर्न अनुमति दिन्छ अत्यावश्यक सुविधा हो। यो अन्त, विशिष्ट साइटहरु र तपाईँले "घर", त्यसपछि समारोह "मर्ज" चयन गर्न चाहनुहुन्छ ट्याब चयन "केन्द्र सार्नुहोस्।" आवश्यक भएमा, तपाईँ सामेल अन्य तरिकामा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईं एक्सेल लाइन र तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न मा एक पंक्ति कसरी बनाउने थाहा छ। यी कदम दिइएको कार्यक्रममा समस्या सुलझाने मा आवश्यक हो भनेर याद गर्नुहोस्।
खैर, तपाईं फेरि कदम के भने, अघिल्लो आदेश रद्द गरिनेछ।
एक म्याक्रो के हो र के तिनीहरूले लागि हो?
धेरै प्रयोगकर्ताहरू शब्द "म्याक्रो" को सामना गरेको छ, तर सबैलाई यो के हो थाह छ। अनुरोध वा छैन - - म्याक्रो विशेष निर्देशनहरू र कार्यहरू कि समावेश गर्ने एक कार्यक्रम छ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रदर्शित गर्न सकिँदैन।
प्रोग्रामर या प्रयोगकर्ता द्वारा लिखित बृहत आंशिक स्वचालित र कार्य पूरा गर्न आवश्यक समय कम गर्न अनुमति दिनुहोस्।
काम ठूलो-मात्रा र डाटा को आवाजमा प्रक्रियाका गर्दा व्यक्ति दोहोरिने कार्यहरू मा धेरै समय बिताउँछन्। आफ्नै जस्तै गतिविधिहरु पूरा गर्न सक्षम हुने एक म्याक्रो सिर्जना गर्नुहोस्, एक्सेल प्रयोगकर्ता काम घन्टा बचत हुनेछ। साथै, राम्रो तरिकाले डिजाइन गरिएको मिनी-कार्यक्रम जो सञ्चालन थप सुविधाजनक र सजिलो बनाउँछ सबै यांत्रिक त्रुटि, पत्ता सक्षम छ।
प्रयोग बृहत केही जोखिम अधीनमा छन्। बेईमान प्रोग्रामर सबै डाटा बिगार्छ र इनकार कारण हुनेछ कि एक म्याक्रो रूपमा प्रस्तुत, भाइरस सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यो कार्यक्रम सबै जानकारी पढेर एक जासूस रूपमा काम गर्न सक्छन्।
स्थानान्तरण एक्सेल रेखाहरू धेरै तरिकामा पूरा गर्न सकिन्छ। तपाईं वर्ण को एक ठूलो रकम प्रविष्ट गर्नुपर्छ जहाँ मामला मा, तपाईं कार्यक्रम समारोह "आसन्न कक्षहरू मा बगिरहेको पाठ।" सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि जानकारी बहु लाइनमा प्रदर्शन गरिनेछ।
यो बक्स मा राखिएको थियो भनेर लामो पाठ उपचार गर्न सकिन्छ। यो गर्न, ट्याब "सम्मिलित" र त्यसपछि "पाठ" र "क्याप्सन" चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं टाइप सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पाठ बाकसमा, यसलाई सीमाना गर्न सन्दर्भ बिना संलग्न सामाग्री को ढाँचा पूरा गर्न सम्भव छ।
एक्सेल मा एक पंक्ति सार्न सजिलो तरिका, - माउस यसलाई सार्न छ। यसलाई चयन कक्षमा कर्सर सार्न र बायाँ माउस बटन पकड गर्न, नयाँ स्थानमा चयन क्षेत्र तान्नुहोस् आवश्यक छ। यो सुविधा सक्षम, तपाईं गर्न सक्छन् "विकल्प" मा - "विकसित"।
कसरी एक्सेल पंक्ति मा एक पंक्ति बनाउन जान्नु र अन्य व्यावहारिक सीप भएको, तपाईं पक्कै सजिलो कार्यक्रम काम र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, काम समय बचत गर्नेछ।
ब्याटिङ-फाइल आदेश (Windows)
किन विन्डोज एक con फोल्डर सिर्जना गर्न?
भाकपा ढाँचा - यो के हो?
कसरी भाइरस आक्रमण पछि एक फ्लैश ड्राइव मा लुकेका फाइलहरू खोल्न
पुन: निर्यात - यो ... पुन निर्यात को प्रक्रिया। पुन-निर्यात रूस गर्न
एन्टिबायोटिक कसरी लिने? स्वास्थ्य गर्न हानि बिना एन्टिबायोटिक के पिउन?
बच्चा पानी धेरै पिउने: कारणहरू, विकृति
खेल Dreamfall अध्याय: खण्डलाई र समीक्षा बुक दुई। Dreamfall अध्याय: सिस्टम आवश्यकताहरु, फेसन, कोड र Cheats
मूल र शब्द को अर्थ: अनुग्रह के हो
कहिलेकाहीं संग्रहकर्ता आसक्त जस्तो देखिन्छ। यी फोटाहरू मा एक नजर
मानिसहरू मा Alopecia areata: लोक उपचार र दबाइहरु, तस्बिर, समीक्षा, कारण को उपचार
क्रास्नायार्स्क समुद्र - एक कृत्रिम जलाशय। को माछा मार्ने चट्टानहरु रोमाञ्चक माछा मार्ने